I-Aluminium yeFoyile yeFiberglass Ilaphu abavelisi kunye nabaxhasi - China Aluminium Ifoyile yeFiberglass Fabric Factory
Aluminium ngefoyile ye-aluminiyam Fibreglass ingubo
Ingubo yomlilo yeAluminiyam Ifoyile yeFiberglass ingubo yefoyile yealuminiyam kunye nelaphu le-fiberglass elenzelwe izinto. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
Aluminium ngefoyile ye elaminethiweyo fiberglass ingubo
Aluminium ngefoyile ye elaminethiweyo Fibreglass ingubo yi ngefoyile ye-aluminiyam kunye fiberglass ngelaphu izinto composited. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
Aluminium Camera fiberglass Ilaphu yi ngefoyile ye-aluminiyam kunye nelaphu fiberglass ngelaphu izinto. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
Ifayibha yeglasi yeAluminiyam
I-fiberglass Aluminium yi-aluminium foil kunye nelaphu le-fiberglass elenziwe ngezinto. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
IAluminiyam iFiberglass yifoyile yealuminiyam kunye nelaphu elenziwe ngombala wefiber. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
Ilaphu elenziwe ngombala we-fiberglass yi-aluminium foil kunye nelaphu le-fiberglass elenziwe ngezinto. Ngobuchwephesha obukhethekileyo nobuphambili, ubume bealuminium yento egudileyo, ecocekileyo kunye necacileyo, kunye ne-GB8624-2006 njengomgangatho wokuhlola.
Aluminium ngefoyile ye Camera Camera fiberglass ingubo
Aluminium ngefoyile ye Camera fiberglass ingubo ubukhulu becala yenziwe ubuchule ekhethekileyo ukwamkela uhlobo ekhethekileyo bond fireproofing leyo kwasekwa inwebu elingqingqwa, iye umphezulu egudileyo kunye nokuqaqamba eliphezulu ezikhanyayo kunye namandla eqine, amandla uphawu elungileyo, kwaye irhasi-zokufunda kwakhona, kwaye ungangenisi amanzi.
I-Aluminium Fibreglass Cloth lukhuselo olugqibeleleyo lokugubungela izixhobo ezikufuphi kwimithombo ebengezelayo enje ngeslabs eshushu eshushu, ulwelo kunye nesinyithi esityhidiweyo okanye iglasi, ilangatye elivulekileyo / iplasma okanye izinto ezininzi zeemoto. Ikhusela ucingo lweshishini, intambo, umbhobho, ii-hydraulic kunye nekhabhathi yezixhobo kunye nokuvalelwa.
Ilaphu leFiberglass edibeneyo
Indwangu ye-fiberglass e-Aluminised yenziwe ngamalaphu e-fiberglass alaminishwe ifoyile ye-aluminium okanye ifilimu kwelinye icala. Iyakwazi ukumelana nobushushu obukhanyayo, kwaye inendawo egudileyo, amandla aphezulu, ukubonakala okuhle okukhanyayo, ukutywina uphawu, ubungqina begesi kunye nobungqina bamanzi. Ubunzima beefoyile zealuminium buvela kwi-7micro ukuya kwi-25 encinci.
Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Acrylic Camera Fibreglass, Indwangu yeFiliclass Camera, Ingubo yeFiberglass, Ingubo yeAlglised fiberglass,